Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola lebhola lesiNgisi Ama-Todd Cantwell Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa ngokuthi “Cantwell”. Indaba yethu yeTodd Cantwell Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawuleka kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube yimanje.
Impilo kanye nokuvuka kukaTodd Cantwell. Ama-Image Credits: edp24 no I-TheFA.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi uyinto ethokozisayo ebaleni eliphakathi. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-Todd Cantwell's Biography ethakazelisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Ama-Todd Cantwell Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Umlingisi UTodd Owen Cantwell wazalwa ngosuku lwe-27th lukaFebhuwari 1998 edolobheni lase-East Dereham eNgilandi. Wazalelwa kubazali abathanda ibhola elihlanganisa nobaba okhonjwe igama uSteve kanye nonina onganquma ukudalulwa nguCantwell ngemuva kokushicilelwa kwale bio.
UTodd Cantwell wazalelwa abazali okwaziwa kancane ngaye. Ama-Image Credits: I-Edp24 ne-PxHere.
Ngokubukeka nokubukeka kwakhe, uCantwell uyisizwe saseBrithani sobuhlanga obumhlophe obunezimpande ezimbalwa ezaziwayo. Wakhulela lapho azalelwa khona e-East Dereham, e-England eceleni komfowabo uJordani nodadewabo u-Amber.
UTodd Cantwell wakhulela e-East Dereham eNgilandi. Ama-Credits Wezithombe: Edp24 no Pinterest.
Ukukhula eDereham, uCantwell wayeyingane enamehlo angenamehlo futhi eyayithanda ukubuka izinhlelo zethelevishini ezinjenge- “Tracy Beaker” futhi zidlala ibhola nontanga yakhe. Wayenamaphupho okuba ngumdlali webhola lezinyawo esemncane kakhulu futhi wasekelwa ukwesekwa ngabazali bakhe “abathandekayo beArsenal” ababekhulisa izifiso zakhe ngeminyaka.
Ama-Todd Cantwell Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
UCantwell wayenemfundo yakhe yamabanga aphansi noma eyisisekelo esikoleni iKings Park eDereham, eNgilandi ngaphambi kokudlulela eNorthgate High School - futhi naseDereham, e-England - ngemfundo yakhe yamabanga aphakeme.
Izithombe zikaTodd Cantwell njengomfundi wesikole saseKings Park e-East Dereham, e-England. Isikweletu Sezithombe: Edp24.
Ngenkathi kuzo zombili izikhungo zemfundo, uCantwell wayengumdlali webhola lezinyawo ikakhulukazi eNorthgate High lapho amagalelo akhe empumelelweni yeqembu lesikole ayechazwa ngokuthi “ngaphezulu nangaphezulu”.
Ama-Todd Cantwell Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ingabe lokhu ukubhalwa kwe-bio kuhamba ngokushesha kakhulu? vele akunjalo. Bahlehle njengoba sibuyela emuva ekuzibandakanyeni kukaCantwell ebholeni lezinyawo ngaphambi kokuba aphuphe ukuya eNorthgate High School. Uyazi ukuthi uCantwell wadlalela izinhlelo zentsha yaseDereham Town?
Yebo, ngokuqinisekile wenza futhi waba isimangaliso lapho ewina wonke amabhola kuzokunikezwa izintambo ze-U8 zeDereham Town ne-U9. Cha ngiyabonga ngefomu lompetha likaCantwell, kwethulwa umthetho omusha owenza ukuthi umdlali ngamunye afanelekele ukuwina indebe eyodwa nje. Wayengeyena yini amandla okulinganisela?
UTodd Cantwell ngeziqubu eziningi azuze ezinhlelweni zentsha eDereham Town. Isikweletu Sezithombe: edp24.
Ama-Todd Cantwell Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umlando Wendlela Yokudumisa
Ngaphambi kokuthi umthetho wokubekelwa imingcele weDereham Town Youth ungabamba uCantwell, owayeneminyaka engu-10 ngaleso sikhathi wayesethuthele eNorwich Academy lapho kwakumele aqhamuke khona meteoric eqenjini lakhe njengoba ayelindele. Ngaphandle kwalokho, uCantwell wathola ucingo lakhe lokuqala lokusebenzela ezweni lonke neqembu lase-England i-U17 lapho wayeneminyaka eyi-16 e-2014.
UTodd Cantwell wabizelwa eqenjini le-U17 laseNgilandi lapho eneminyaka yobudala be-16. Isikweletu Sezithombe: I-TheFA.
Ngonyaka we-2017, uCantwell waqanjwa kabili esikhundleni somdlalo weNorwich kodwa akakaze abonakale eqenjini eliphakeme. Lo mdlali wasesiswini obemagange amasonto ambalwa wayedlulile emgubhweni wakhe wokuzalwa we-20th lapho agcina ukwenza idokhumenti engaphumelelanga eqenjini lokuqala leNorwich City ngesikhathi somdlalo weNdebe yeNdebe neChelsea eStandford Bridge ngoJanuwari 2018. Ngemuva kwalokho wabe ebolekwe kwikilabhu lesibili lamaDashi uFortuna Sittard isizini yonke.
Ama-Todd Cantwell Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ukudumisa Indaba
Kwakuyiklabhu lesibili leFortuna Sittard lapho uCantwell akhombisa ukuthi wayengeyena umdanso omubi ngokushaya amagoli kabili nangokuhlinzeka abasizi abathathu ngokubonakala kwe-10 ukusiza ikilabhu ukuthi liphakamise ukukhushulwa ku-Eredivisie ekugcineni komkhankaso we-2017-18.
UTodd Cantwell usize uFortuna Sittard ukuthi anyuselwe esikhundleni se-Eredivisie. Isikweletu Sezithombe: I-Twitter.
Ukubuyela kwakhe ekhaya eNorwich City, uCantell wanikezwa isiqalo sakhe sokuqala nale kilabhu ngesikhathi somdlalo weNdebe yeNdebe ye-EFL neSterage ngo-Agasti 2018. Uqhubekele phambili wenza ukubonakala kwe-24 kuyo yonke imiqhudelwano ngesikhathi sonyaka we-2018 / 2-9 njengoba iNorwich City iphumelele isicoco seSky Bet Championship.
Ukudlondlobala masisha uCantwell usezisungula njengomdlali wasesiswini onamandla kwiPremier League lapho iqhawe lakhe lakamuva belishaya igoli libhekene neChelsea kwi25th ka-Agasti 2019. NgunoGoli, uCantwell - ogqoke inombolo yejezi le-14 - waba ngumdlali wokuqala wokuzalwa waseNorfolk ukuthola igoli lePremier League ngeNorwich City eminyakeni engaphezulu kwe-14. Abanye, njengoba besho, umlando.
UTodd Cantwell ushaye igoli lakhe lokuqala lePremier League ngo-Agasti 2019 ngesikhathi i-2-3 yeNorwich City yehlulwa kuChelsea. Isikweletu Sezithombe: IPinkun.
Ama-Todd Cantwell Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imininingwane Yokuphila Ubudlelwane
Amaroses abomvu, ama-violets aluhlaza okwesibhakabhaka, uCantwell angathandana naye, kepha awashiyi mkhondo wawo. Ngakho-ke, angeke abhalwe njengabodwa ngokwesigaba, futhi nabadlali abasemuva abaziwa ukuthi bashade ngesikhathi sokubhala.
Ngaphandle kwalokho, impela siyazi ukuthi ugxile ekuqiniseni indawo yakhe ekuqaliseni kweNorwich City, ikakhulukazi ngemuva kokusayina inkontileka entsha engambona ukuthi asale ekilabhini kuze kube yi2022. Kungabanga isikhathi eside ngaphambi kokuba uCantwell azitholele intombi noma i-wag futhi kungenzeka abe nendodana (yam) nendodakazi (yamantombazane) inyunyana.
UTodd Cantwell kungenzeka angashadi ngesikhathi sokubhala. Isikweletu Sezithombe: I-LB ne-YouTube.
Ama-Todd Cantwell Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso Okuphila Komndeni
Umndeni ubalulekile kuCantwell futhi konke okunye kuza okwesibili kumvikeli ojabulela impilo yomndeni emangalisayo. Sikulethela amaqiniso ngamalungu omndeni wakwaCantwell.
Mayelana nobaba kaTodd Cantwell: Ubaba kaCantwell ukhonjwe ukuthi ngu Steve Steve. Ubaba obesekelwa njalo waqinisekisa ukuthi umdlali wasesiswini uhlanganisa ukuzibandakanya kwebhola kanye nemfundo ejwayelekile kuya ezingeni eliphakeme esikoleni esiphakeme ngaphambi kokuba uNorwich academy athathe izintambo. USteve uyaziqhenya ngokuthi uCantwell uye waba ngubani futhi kwesinye isikhathi uhamba naye emicimbini yokupha.
Mayelana nomama kaTodd Cantwell: Yize kuncane okwaziwayo ngomama kaCantwell, Usize wakhulisa lo mdlali wasesiswini futhi wahambela eminye yemidlalo yakhe. Ukusekelwa kwakhe ngumama kuCantwell kuyanda ngokuxhamazela ngekhono lakhe lokuthola izinkomba ezinhle ngaye ngenkathi kuqhubeka izingxoxo. Kungabanga isikhathi eside ngaphambi kokuthi uCantwell abeke ijubane lezinjongo zezindodana zakhe ngokufaka izithombe zakhe naye kwezokuxhumana.
UTodd Cantwell wakhuliswa ngabazali abangisekelayo futhi okuncane okwaziwayo ngaye. Isikweletu Sezithombe: I-TransferMarket ne-ClipArtStation.
Mayelana nezingane zakubo kaTodd Cantwell: UCantwell unezingane ezimbili ezihlonzayo, bafaka umfowabo uJordani nodadewabo u-Amber. NjengoCantwell, uJordani uthanda ukudlala ibhola futhi uzichaza njengethalente lebhola lesithathu emndenini. Okwamanje, akukho okuningi okwaziwayo ngodade waseCanwell u-Amber okukholelwa ukuthi ukuphela kwendodakazi yomndeni.
Mayelana nezihlobo zikaTodd Cantwell: Uqhubekela phambili emndenini wakwaCantwell, unomalume ogama lakhe nguKevin Owen, waseFakenham yize kungaziwa kangako ukuba ngumalumekazi, umshana wakhe nomshana wakhe. Ngaphezu kwalokho, umkhulu noCantwell ongukhokho wakhe noyise womama abakaziwa namanje kanti abazakwabo bomdlali wasesiswini bebengakadalulwa ezenzakalweni ezinhle kakhulu zobuntwana bakhe kuze kube manje.
Ama-Todd Cantwell Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso okuphila komuntu siqu
Ubuntu bukaCantwell bunokwakheka kwezimpawu zePisces Zodiac ezibandakanya ukuzwela, ubuqambi kanye nokuqagela kwe-spot-on. Izici zigcwala ukumnikeza umuntu opholile omenza athandwe ngabangane nabalandeli.
Ukujulile phakathi kwezici eziyinkimbinkimbi zobuntu bukaCantwell, akaze embule imininingwane ngempilo yakhe yangasese neyangasese. Ngakho-ke, akukho okuningi okwaziwayo ngezinto azithandayo nezintshisekelo zakhe ngaphandle kokubuka ama-movie, ukudlala imidlalo yevidiyo, ukuhamba nokuchitha isikhathi nemvelo.
Ukuhamba kungenye yezindlela zikaTodd Cantwell zokuzilibazisa. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Ama-Todd Cantwell Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ama-Lifestyle Facts
Ukhuluma ngendlela uCantwell enza ngayo futhi asebenzisa ngayo imali yakhe, akha inani elifanele eliqinile, emholweni awutholile ngokudlala ibhola leqembu lokuqala. Ezinye izimboni ezifaka isandla emnothweni wakhe zithatha imvelaphi yazo kwizivumelwano zokutshala imali nokutshalwa kwezimali kwangasese.
Kodwa-ke, uCantwell uphila impilo elondolozekile njengoba ebheke phambili ekubeni ngumholo omkhulu ngeminyaka. Ngenxa yalokhu, kungathatha isikhashana ngaphambi kokuthi abalandeli bambone eshayela izimoto ezihlukile futhi enezindlu ezibizayo njengabadlali bezilwane. Kodwa-ke, mkhulu ngokuhambela izindawo zokungcebeleka zamazwe omhlaba ukuphumula ngezikhathi zokuphumula.
UTodd Cantwell (kwesokunxele kwesobunxele) ejabulela iholide lakhe erenki ebizayo. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Ama-Todd Cantwell Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Ngabe wenza kahle kanjani uTodd Cantell ngaphezu kwalokho okubhaliwe ngaye kule bio? Sethula amaqiniso amancane angaziwa noma angaziwa mayelana nomdlali wasemuva.
ISAHLUKO: UCantwell akamkhulu kule nkolo njengoba enganikeli ngqondo yokuthi ungumuntu wokholo ngenkathi kubhalwa izingxoxo noma umgubho wezinhloso ngesikhathi sokubhala. Kodwa-ke, izingqinamba lezi zimvumela ukuthi abe ngumKristu.
I-TATOO: Akanabo ubuciko bomzimba ngaleso sikhathi sokubhala futhi angathola i-tattoo ecabanga ngokwanda kwakhe kwezinsizakalo zokudala. Kuze kube yileso sikhathi, uCantwell uyindlela ayedalwe ngayo.
UTodd Cantwell akanawo ama-tattoos okwamanje. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
UKUTHEKA KANYE UKUQHAWULA: Umdlali wasesiswini udlala ngokulingana kwiligi yama-greats ebhola angabhemi futhi angaphuzi ngesikhathi sokubhala. Izizathu zokunyathela leyo ndlela ephilile ukuqinisekisa ukuthi umzimba uhlala usesimweni esifanele ukuphatha izidingo zebhola lezinyawo eziphezulu.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iTodd Cantwell Childhood Indaba yethu kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-Max Aarons Indaba Yobuntwana Kanye ne-Untold Biography Facts
Usuku olushintshiwe: Agasti 24, 2019